စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
ကမ္ဘာ့ဖလားဒုက္ခသည်နေ့ - လယ်ယာလုပ်ငန်းရှင်များအတူတကွစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက် 2018ကျွန်တော်တို့ရဲ့လယ်ယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Farhan နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်, ငါကျန်းကျန်းမာမာလတ်ဆတ်တဲ့အသီးအနှံနဲ့သူ့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းပေးသည်မိမိစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူပြီးပြီ | ကမ္ဘာ့ဖလားဒုက္ခသည်နေ့
ဒါဟာဒုက္ခသည်တစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိတ်မုန့်ဖွင့်ဖို့ပိုက်ဆံမရှိကြ, အစား, သူကအွန်လိုင်းကသူ့လက်ပိုသကြားလုံးရောင်းDavidson ကောလိပ်မှာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဒုက္ခသည်တစ်ဦးကိတ်မုန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖွင့်ကူညီပေးသည်. သူတို့ကတစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိတ်မုန့်ဖွင့်ဖို့ပိုက်ဆံမရှိကြ. ဒါကြောင့်သူတို့ကအွန်လိုင်းမှကိတ်မုန့်ဖွင့်လှစ်။